Daawo Sawiradda: R/W c/wali oo kulan la qaatay maamulka Koonfur galbeed soomaaliya, Ka Hor inta Aaney U soo Ambabaxin Magaalada Baydhabo. – idalenews.com
Daawo Sawiradda: R/W c/wali oo kulan la qaatay maamulka Koonfur galbeed soomaaliya, Ka Hor inta Aaney U soo Ambabaxin Magaalada Baydhabo.
Ra’iisul Wasaaraha dalka Cabdiweli Sheekh Axmed iyo qaar kamid ah Golahiisa Wasiirrada waxaa ay kulan la yeesheen Guddiga Maamul u Samaynta gobolada Koonfur Galbeed soomaaliya. Guddigu oo loogu talo galay u gogol xaarida dhismaha Maamulka Koonfur Galbeed soomaiya, maamulkaan oo ay aqoonsi ka heysta madaxda dowlada soomaaliya iyo beesha caalamka, waxaana maamulkaa ku mideysan gobolada sh.hoose, bay iyo bakool.
waxaa kulanka ka hadlay Mudane Maxamed Xaaji Cabdinuur Maddeer, oo ah madaxweynaha KMG ee Maamulka Koonfur Galbeed, wuxuuna uga mahad celiyay Ra’iisul Wasaaraha marti qaadka uu u fidiyay Gudiga dhismaha maamulka Koonfur galbeed soomaliya.
“Mudane Ra’iisul Wasaare, runtii waxaan kugu ammaanayaa dadaalkii dheeraa oo aad u gashay dadka deggan Koonfur Galbeed, waxaanan kaaga haynaa abaal weyn. Dhowr bilood ka hor markii aan Muqdisho soo gaarnay waxaan ahayn dhowr garab oo kala socdo, haddana oo aan dib ugu laabanayno deeganadeennii waad aragtaa isku duubnida naga muuqata. Taasi waxay marqaati u tahay dadaalkaagii inuu miro dhal noqday. Waxaan ka codsanayaa Xukuumadda inay sii waddo taageerada iyo dhamaystirka Maamulka Koonfur Galbeed,” ayuu yiri Mudane Maddeer.
Wasiirka Dhalinyarrada iyo Isboortiga Khalid Cumar Cali, oo ka mid ah xubnaha Guddiga ugu jira Xukuumadda, ayaa ku gubaabiyay dhinacyada in markii ay deeganadooda ku noqdaan ay la yimaadaan dulqaad iyo adkaysi, isagoo xasuusiyay in looga fadhiyo inay gogol nabadeed ku qanciyaan dadka wax tabanaya.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed, oo gunaanadkii kulanka ka hadlay wuxuu kula dar daarmay Guddiga inuu miro dhal noqdo heshiiskii taariikhiga ahaa ee dhinacyadu ku gaareen Muqdisho.
“Waxaan soo xirnay shirarkii muddo ka socday Muqdisho oo looga hadlayay arrimaha Koonfur Galbeed. Maalintii ugu horreysay oo aan Muqdisho isugu nimid waxaa idin dhex yiil kalsooni xumo, waxaadna u kala fadhideen koox koox, maantana waxaa Ilaahay mahaddiis ah inaad is dhex fadhidaan, heshiis wada gaarteen, diyaarna u tihiin inaad shacabkiina u wada adeegtaan” ayuu yiri raisulwasaare c/wail, si aad ah ugu faraxsan sida ay u wada shaqeynayaan madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaliya.
“Xukuumaddu waxay u taagan tahay inay idinka taageerto wax walba oo fududeeynaya hannaanka maamul sameeynta. Waxaan idinkula dardaarmayaa in farxadda hadda idinka muuqata aad kula noqotaan shacabka, kana shaqaysaan soo celinta nabadda iyo isdhexgalka bulshada si meesha looga saaro isfaham waagii ragaadiyey horumarka gobolladaas.” ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Si kastaba ha ahaatee maamulka koonfur galbeed soomaliya ayaa waxa la sugayaa sidii ay gobolka sh.hoose uga xoreyn lahaayeen qolyaha hororka ah ee maalin kasta tacadiyada ka geysta, madaxweyne ku xigeenka maamulka KGS Maxamed xasan faqe ayaa hada kahor waxaa uu sheegay inay awood military uga saari doonaan mooryaanta kusoo duushay sh.hoose. waxa maamulkiisa inuu lasoo baxo awoodiisa milatari isagoo kaaashanaayo ciidamada deegaanka ee gobolka sh.hoose.
Xukuumada raisul wasaare cabdi wali ayaa ku guuleysataya inay hirgeliso maamulka koonfur galbeed, iyadoo maamulka koonfur galbeed uu soo maray marxalado kala duban. Xiligaan waxaa soomali si buuxda ah uga howlgaa sadax maamul goboleed oo ay xukuumada soomaaliya aqoonsan tahay.
Idale News Online,Xafiiska Baydhabao Janaay.
Ciidamada Illaada Xafiiska RW C/weli oo Nin Rayid ah toogtay.
Shacab iyo Kooxda Al-shabab oo Si Ba’an ugu dagaalamay Gobolka Hiiraan.